Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Horohoron-tany namely an'i Guatemala, raha maty kosa ny isan'ny fipoahan'ny volkano dia 62
Horohoron-tany nahatratra 5.2 no voarakitra 65 kilaometatra atsimon'ny Champerico, distrika manamorona ny morontsiraka atsimo andrefan'i Guatemala, araka ny US Geological Survey. Miaraka amin'ny ivon'ilay horohoron-tany tany an-dranomasina sy akaikin'ny hady amoron-dranomasina fantatra amin'ny hoe fetra amerikana afovoany, tsy fantatra mazava raha nisy simba na trano na fotodrafitrasa teny an-tanety. Ny hetsika fitabatabana dia tonga ora vitsy taorian'ny fipoahan'ny volkano Fuego ao amin'ny firenena izay nahafaty olona 105 ary nanery an'arivony handositra ny tranony.
Tonga ny horohoron-tany satria re ny fipoahana avy tany amin'ny volkano Fuego any Goatemalà ny alatsinainy tontolo andro, manarona vondrom-piarahamonina ao anaty vatolampy sy lavenona. Olona 62 farafahakeliny izao no atahorana ho faty tamin'ilay fipoahana lehibe indrindra hita teto an-toerana hatramin'ny taona 1970.
Ny tranga dia nanosika ny filohan'i Goatemalà Jimmy Morales hanambara fa misy tranga maika.
"Manana olona 1,200 manao asa famonjena isika," hoy i Morales tamin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny Alatsinainy. “Miantso ny olon-drehetra indray izahay mba tsy hizara fampahalalana diso. Aza manombatombana satria vao mainka manasarotra ny toe-javatra izany. ”
Tamin'ny alatsinainy lasa teo dia nitatitra ny masoivoho mpamantatra ny toetr'andro ao amin'ny firenena fa nisy fipoahana antonony sy mahery avy tany an-tendrombohitra ka nahatonga ny firongan'ny lavenona nisondrotra nihoatra ny 15,000ft (4,600 metatra) tany anaty rivotra.
Raha nihena ny hetsika tao amin'ilay volkano nanomboka ny alahady, dia nampitandrina ny masoivoho fa misy fikorianan'ny gazy sy volkano mandeha haingana any anaty lava-bato akaikin'ny tendrombohitra. Ny hetsika seismika dia mampitombo ny mety hisian'ny tany amin'ny faritra tsy marin-toerana.
Maherin'ny 1.7 tapitrisa ny olona tratran'io loza io, 3,265 no voatery nandositra ny tranony, araka ny filazan'ny masoivohom-pirenena misahana ny voina Conred.
Lahatsary an'habakabaka navoakan'ny governemanta Guatemala dia nanambara ny fahasimbana nateraky ny fipoahana. Tao anaty sary voatifitra avy tamin'ny angidimby, dia hita fa milevina ao ambanin'ny antontan-davenona sy fotony ny faritra ambanivohitra sy trano fonenana.
Samy nantsoina ny tafika sy ny polisy mba hitady izay ho tafavoaka amin'ny fipoahana.
Lufthansa Group dia manendry ny filoha lefitra vaovao Sales Asia Pacific